A place to say something: သူတို့ပြောသော သူတို့အမြင် (သို့) ကျွန်တော့အကြောင်း
သူတို့ပြောသော သူတို့အမြင် (သို့) ကျွန်တော့အကြောင်း
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆိုတာတော့ အမြင်ချင်း မတူကြဘူးပေါ့.. တစ်ယောက်က အကောင်းမြင်ပေမယ့် အခြားတစ်ယောက်အမြင်မှာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ချင်မှထင်မှာ.. ကိုက ကောင်းရာကောင်းကြောင်း လုပ်သည့်တိုင်အောင် တဘက်လူက အမြင်စောင်းချင်စောင်းမှာပေါ့… ဒါကတော့လူ့သဘာဝပဲ. လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူဖြစ်လာမှတော့ လူတွေရဲ့ ကဲ့ရဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ချီးကျူးခြင်းကို ခံရမှာပဲ…….
ကဲ.. ခုပဲကြည့်… ကိုယ့်ဟာကို အချစ်အကြောင်းလေးခံစားသမျှ ရေးမိတာနဲ့ “မင်းက တိတ်တိတ်လေး ရည်းစားထားချင်တော့ ငါတို့ဆီ လာတောင် မလာနိုင်ဘူးပေါ့လေ” ဆိုပြီး မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စုက ဆွန်းကြီးလောင်းကြလေရဲ့… သတိရလို့ပြောရဦးမယ်… အဲဒီထဲက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ပြောတယ်.. “ကိုရဲက တော်တော် အကောင်းမြင်တတ်တယ်… ကိုယ့်ကိုယ်ကို..” တဲ့.. ထားပါတော့ သူ့အမြငိ သူ့အထင်ပဲ….
ခင်မင်ရင်းနှီးသူတိုင်းကို ခဏခဏစနောက်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်က “နင်ဟာလေ အလျားမရှိ အနံမရှိ သေမဲ့ကောင်” လို့ ကြိမ်ဆဲတာ မကြာခဏခံရတယ်.. အလျားမရှိ အနံမရှိ ဘယ်လို သေမှာတုန်းဟ…
ဟိုတနေ့ကပဲ သူငယ်ချင်းက ကိုရဲဖြစ်လိုက် ကိုမောင်ဖြစ်လိုက် Mr. Lonely ဖြစ်လိုက်နဲ့ nick name သိပ်များတာဘဲဟု မှတ်ချက်ပြုပြန်သကော.. ဒီကိစ္စက ဒီလိုရှိပါ၏။ ကိုရဲဆိုတာက ရန်ကုန်မှာတုန်းက သိပ်မခေါ်ကြပါဘူး… ဟိုမှာကလဲ ကိုရဲသိပ်များသကိုး… အမြည်ရင်းလောက်ပဲခေါ်ကြတာ.. ဒီကျမှ ဒီကသတ္တ၀ါတွေက ခေါ်ရခက်တယ်ဆိုလို့ English Name တော့မလိုချင်တာနဲ့ ကိုရဲဖြစ်သွားတာ.. (Mr. Ye` ပေါ့) ကိုမောင်ဆိုတာကကောတဲ့… အင်း.. ရှင်းရမှာ နဲနဲရှည်တယ်… အတိုချုံးဆိုရရင်.. ကျုပ်က ရခိုင်မျိုးနဲနဲစပ်တယ်(ရခိုင်စကားလုံးဝလုံးဝနားမလည်ပါ) ရခိုင်တွေက သားအကြီးကို မောင်မောင်လို့ ခေါ်တယ်၊ ငယ်သူတွေက ခေါ်ရင်း ကိုမောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့… တစ်ခါတစ်ခါ အလှူတွေဘာတွေလုပ်ရင် သိပ်ရယ်ရတာ.. “မောင်မောင်ရေ” လို့ခေါ်ရင် “ဗျာ” ဆိုတဲ့သံပြိုင်ထူးသံကြီးကထွက်လာရော.. ဓလေ့ဆိုတော့လဲ..
ကျုပ် Consultant နဲ့ ခင်တဲ့သူအချို့ကလည်း မောင်မောင်လို့ခေါ်ကြလေရဲ့ … Mr. Lonely ဆိုတာက AKON ရဲ့ Mr.LONELY သီချင်းနားထောင်ပြီး အနည်းငယ် Lonely ဖြစ်တာချင်းတူတာနဲ့ Gmail ရဲ့ Nick ကိုပြင်လိုက်တာပါ။ ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး… သူပြောနေကြစကားနဲ့ဆို Nothing Special ပေါ့ (ဟီး.. သတိရသွားလို့)
စံဇာဏီဘိုကတော့ ဤသို့မှတ်ချက်ပြု၏။ “ သိမ်မွေ့သောဟန်နှင့် တဇွတ်ထိုး လုပ်တတ်သော အသွင်အပြင် နှစ်မျိုးလုံးကို ပေါင်းစည်းထားသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လွမ်းမိုးနိုင်သော သဘာဝစရိုက်ရှိ၏။ ဖိုသီဖတ်သီ နေတတ်သည်။ စကားပြောသောအခါများတွင် အငြင်းသန်ပြီး ကတ်သီးကတ်ဖဲ့ ပြောခြင်းပြုတတ်သည်။ သပါးသူနှင့်မတူသော ရှူ့ထောင့်မှ တွေးတတ်ပြောတတ်သည်။ ခေါင်းမာအရွဲ့တိုက်၍ လောကကြီးကို သရော်သောအသွင် အမြဲပေါ်နေတတ်သည်။ အတွင်းစိတ်နှလုံး အလွန်သိမ်မွေ့သည်။ ခံစားချက် ပြင်းထန်သည်။ အားနည်းသည့်ဘက်မှ ရပ်တည်သည်။ မှန်သည့်ဘက်မှ တိုက်ပွဲဝင်ရန် အမြဲတစေ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်သည်။ အေးချမ်းသိမ်မွေ့သော စိတ်ဓတ်နှင့် ရဲရင့်ပေးဆပ်သော နှလုံးသား၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်တတ်သည့် စရိုက်၊ လွပ်လပ်မှုမြတ်နိုးသည့် သဘာဝများ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အခက်အခဲကြားမှ ရုန်းထွက်နိုင်သည့် စိတ်ဓတ်ရှိ၍ အနှောင့်အယှက် အတိုက်အခံများနှင့် ကြုံတွေ့လေ အရည်အသွေး ထက်မြက်လေ ဖြစ်သည် ”
ခင်ဗျား အမြင်ကလဲ တစ်မျိုးဖြစ်မှာပါ.. ဒီလိုပါပဲ.. တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ မြင်တော့.. တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ ပြောကြတာ ပေါ့…
Posted by ko ye at 1:57 AM
K Ace said...
So you must beascorpio.
ko ye said...
Humm... I born on same day as Bo Gyouk Aung San. :)